Ny sidina atsy Afrika atsimo izao dia ny United Airlines sy Airlink
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina atsy Afrika atsimo izao dia ny United Airlines sy Airlink
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ity codeshare ity dia hanamora ny alàlan'ny mpanjifanay Amerika Avaratra ny hahatratra ny Okavango Delta, Chobe, ny Valan-javaboary Kruger ary ny efitrano malalaky ny lalao tsy miankina, Cape Town, ny Garden Route, Swakopmund ary ny Copperbelt, sns.
United Airlines sy Airlink dia nanambara ny fifanarahana ara-barotra hanampiana ny mpanjifa hijery an'i Afrika atsimo.
Ny fiaraha-miasa vaovao dia manome ny mpanjifa fitsangatsanganana mora any amin'ny toerana 40 mihoatra ny any Afrika atsimo.
Ny mpanjifa United Airlines dia afaka mahazo na manavotra kilometatra amin'ny sidina United sy Airlink.
Androany, United Airlines sy Airlink, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tatsimo, dia nanambara fifanarahana codeshare vaovao izay hanome ny mpanjifa fifandraisana bebe kokoa eo amin'i Etazonia sy i Afrika atsimo noho ny fifanekena an'habakabaka hafa. Ny fifanarahana vaovao, izay eken'ny fankatoavan'ny governemanta, dia hanolotra fifandraisana mijanona iray avy any Etazonia mankany amin'ny toerana 40 mahery any Afrika atsimo. Ho fanampin'izany, United no ho zotram-piaramanidina voalohany mampifandray ny fandaharam-pahatokiany amin'ny Airlink, mamela ny mpikambana MileagePlus mahazo sy manavotra kilaometatra maro rehefa mandeha amin'ny sidina Airlink izy ireo. Ity fiaraha-miasa vaovao ity dia ho fanampin'ny fiaraha-miasa efa misy an'i United sy ny mpikambana ao amin'ny Star Alliance South Africa Airways.
“United dia manohy mampiseho ny fanolorantenantsika ho any Afrika, manomboka sidina telo vaovao mankany amin'ny kaontinanta amin'ity taona ity fotsiny, ao anatin'izany ny serivisy vaovao mankany Accra, Ghana; Lagos, Nizeria ary Johannesburg, Afrika Atsimo, ”hoy i Patrick Quayle, filoha lefitry ny tambajotra iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny United Airlines. “Ary ankehitriny amin'ny alàlan'ny fifanarahana codeshare miaraka amin'i Airlink - izay fiaraha-miasa manitatra indrindra any atsimon'i Afrika - ho hitan'ny mpanjifa mora foana ny toerana misy ny lisitra siny maro manerana ny kaontinanta, anisan'izany ny fifandraisana mora amin'i Zambia, Zimbabwe ary maro hafa. ”
United Airlines dia nanohy nanitatra ny dian-tongony nankany Afrika, niaraka tamin'ny serivisy mivantana tamin'ny toerana afrikanina efatra. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nanambara ny sidina eo anelanelan'ny Washington, DC sy Lagos Nigeria fa hanomboka ny 29 Novambra, raha eken'ny governemanta. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanangana serivisy vaovao i United eo anelanelan'ny New York / Newark sy Johannesburg, Afrika Atsimo ary eo anelanelan'ny Washington, DC sy Accra, Ghana, izay antenaina hiasa isan'andro amin'ity volana desambra sy janoary ity. Ny serivisy malaza an'i United eo anelanelan'ny New York / Newark sy Cape Town, Afrika Atsimo dia hitohy amin'ny 1 Desambra ihany koa.
“Amerika avaratra dia tsenan'ny loharano manan-danja ho an'ny tanjontsika. Ity codeshare ity dia hanamora ny alàlan'ny mpanjifanay Amerika Avaratra ny hahatratra ny Okavango Delta, Chobe, ny Valan-javaboary Kruger ary ireo efitrano malalaky ny lalao tsy miankina, Cape Town, the Garden Route, Swakopmund ary Copperbelt, ankoatry ny hafa, ”hoy i Airlink Tale jeneraly sy talen'ny fitantanana, Rodger Foster. “Toy izany koa, ny codeshare dia midika fa ny mpanjifanay any amin'ireo firenena 12 Afrikanina tompoinay ankehitriny, dia hanana fidirana haingana sy seamless amin'ny tambajotra United rehetra.”
Ity codeshare vaovao ity dia hampiharina amin'ny fankatoavan'ny governemanta farany.